अन्डाको आयुबारे सचेत हुनुहुन्छ ? अण्डाको नाममा विष पो खाइरहनु भएको छ की ! – ईमेची डटकम
अन्डाको आयुबारे सचेत हुनुहुन्छ ? अण्डाको नाममा विष पो खाइरहनु भएको छ की !
भारतमा एउटा विज्ञापन खुब चर्चित थियो, ‘सन्डे हो या मन्डे, रोज खाओ अन्डे ।’ मतलब हरेक दिन अन्डा खाऔँ र स्वस्थ रहौँ ।
यो विज्ञापन मुख्यतः बालबालिकाका लागि बनाइएको थियो ताकि बालबालिकामा दैनिकरूपमा अन्डा खाने बानी बनोस् ।
किनभने अन्डामा क्याल्सियम, आइरन, प्रोटिन, भिटामिन ए, फस्फोरस, भिटामिन डी, ई तथा जिङ्कलगायतका तत्व पाइन्छ, जसले बालबालिकाको सर्वाङ्र्गीण विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।
अन्डालाई पौस्टिक तत्वका पूर्ण स्रोत मानिन्छ । एउटा अन्डामा भिटामिन ए, बी टु, बी फाइभ, बी सिक्स, बी टुवेल, भिटामिन डी, ई, के, क्याल्सियम, जिङ्क, ल्युटिन, ओमेगा थ्री, फोस्फरस, आइरन, सेलेनम आदि पाइन्छ । मानव जीवनलाई चाहिने अधिकांश तत्व पाइने भएकाले अन्डालाई प्रोटिनको पूर्ण स्रोत मानिन्छ । अझ बालबालिकाको विकासका लागि त दैनिक अन्डाको प्रयोगलाई झनै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर अन्डा मानव जीवनका लागि जति आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ, यसको सही र वैज्ञानिक प्रयोग गर्न नसके त्यत्तिकै हानिकारक र घातक पनि छ ।
बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामीलाई अन्डा खुवाइन्छ । तर हामीले खाने अन्डाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने बारेमा चासो दिएका छैनौँ । हामीले खाने अन्डा कुन मितिमा उत्पादन भएको हो र कहिलेसम्म खान मिल्छ भन्ने कुराको जानकारी अन्डा उत्पादक वा वितरकले पनि जानकारी दिने गरेका छैनन् ।
जब तरकारी बिग्रन्छ, मासु बिग्रन्छ, चामल र पीठो बिग्रन्छ भने अन्डा पनि अवश्य नै बिग्रन्छ । कुनै पनि सामानको उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र शुल्क तोकिएको हुन्छ । तर हामीले आम बजारमा पाउने अन्डामा यसबारे कुनै कुरा उल्लेख गरिएको हुँदैन ।
हामी सामान्य पसलमा जाँदा पनि त्यहाँ क्रेटमाथि क्रेट राखेर अन्डाको बिक्री गर्न राखिएको हुन्छ । तर उचित तापक्रम (कुल चेन मेन्टेन)मा नराखिएको अन्डा र मिति गुज्रिएका अन्डाले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा गर्न सक्छ ।
अहिले बजारमा पाइने सबैजसो अन्डामा उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति राखिएको हुँदैन । जसको कारण उपभोक्ताले कहिलेसम्म अन्डा खाइसक्नुपर्ने हो भन्ने कुराको जानकारी नै पाएका हुँदैनन् ।
त्यति मात्रै होइन, अन्डाको ग्रेडिङ गरी मूल्य तोक्नुपर्ने विषय र सही तापक्रममा अन्डा राख्नुपर्ने विषयबारे पनि जानकारी छैन । यस कारण हामीले सबै अन्डालाई एउटै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने हामीले खाइरहेको अन्डा स्वस्थ छ कि छैन भनेर जान्ने अवस्था पनि छैन ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भन्छ, ‘अन्डालाई उत्पादन भएको मितिले २१ दिनभित्र खाइसक्नुपर्छ ।’ अनि २१ दिनभित्र खाने अन्डालाई पनि कम्तीमा ४ देखि बढीमा १८ डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा बाकसभित्र फ्रिजमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै मानव स्वास्थ्यमा काम गर्ने अर्को सम्मानित संस्था एफडीएले पनि अन्डालाई १० देखि १३ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखेर उत्पादन मितिले अधिकतम २८ दिनमा खाइसक्नुपर्ने भनेको छ ।
तर अहिले बजारमा पाइने अन्डा न उचित तापक्रममा राखिएको छ न अन्डा प्रयोग गर्ने मितिको बारेमा नै उल्लेख भएको हुन्छ । पशु स्वास्थ्यमा काम गर्ने एक सरकारी डाक्टरका अनुसार नेपालमा प्रयोग गरिने अधिकांश अन्डा मापदण्डविपरीत अर्थात प्रयोग गर्न अनुपयुक्त छन् ।
मापदण्डविपरीतका अन्डा खाँदा अन्डाबाट लाग्ने विभिन्न रोग मानिसमा सर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सफा नभएको, फोहोर तथा रगत टाँसिएको, चर्केको, खस्रो सतह भएको, नरम हुन सक्ने, आकार अलि असाधारण, ४२ ग्रामभन्दा कम भएको र पहेँलो भाग नहुने वा सानो हुने वा दुईवटा भएको अन्डालाई समूह ‘ग’ तथा कम गुणस्तर भएको समूहमा राखिएको छ । यसरी अन्डाको मापदण्ड तोकिए पनि बजारमा एउटै मूल्यमा अन्डा बिक्री हुँदै आएको छ ।
अन्डा बजारमा ल्याउनुभन्दा पहिला अन्डा उत्पादन गर्ने फार्मको नाम तथा ठेगाना, अन्डाको किसिम, अन्डा उत्पादन भएको मिति र प्रयोग गर्ने मिति लेखिएको हुनुपर्छ । यस्तै अन्डाको सङ्ख्या, परिणाम, पोका क्रेट र अन्डा प्याक गरेको मिति, स्थान र समय उल्लेख गरेको हुनुपर्ने सरकारको मापदण्डमा उल्लेख छ । तर बजारमा अन्डा ल्याउँदा यो मापदण्डमा उल्लेख गरिएको कुनै पनि कुरा कार्यान्वयन भएको छैन ।
इचङ्गुस्थित एक अन्डा उत्पादक किसानका अनुसार अन्डा उत्पादन भएको एक सातापछि मात्रै वितरकले उक्त अन्डा लैजान्छन् । अनि वितरकबाट खुद्रा विक्रेताका पसलमा पुग्न कम्तीमा अर्को ७ सात दिन लाग्ने गरेको छ । अनि खुद्रा व्यापारीले आफ्नो पसलबाट उपभोक्तालाई बेचेर सकाउन अर्को २ सातासम्म लाग्ने गरेको छ ।
यसरी हेर्दा एकै मात्र डिलर भए उत्पादक र उपभोक्ताको घरमा अन्डा पुग्न करिब २८ दिन लाग्ने गरेको छ । उपभोक्ताले पनि एक एक वटा नलगेर कैयौँ उपभोक्ताले एक क्रेट नै अन्डा लैजाने भएकाले त्यो सकिन पनि अर्को करिब १ महिना लाग्छ । यसरी उत्पादन भएको मितिले अन्डाको उपभोग हुँदा करिब ६० दिन लाग्ने गरेको छ ।
अन्डामा पानी वा अन्य केही तरल पदार्थ पर्यो भने पनि बिग्रन्छ, अलिकति चर्कियो वा फुट्यो भने बिग्रन्छ, १८ डिग्री वा सोभन्दा माथिको तापक्रममा निरन्तर रह्यो भने पनि बिग्रन्छ र २८ दिन कटेपछि त झनै बिग्रन्छ । तर नेपालमा उत्पादित वा वितरित सबैजसो अन्डामा उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति उल्लेख नगरी खुल्ला रूपमै अन्डाको विक्रीवितरण भइरहेको छ, जसको कारण अन्डा खानयोग्य छ कि छैन भनेर छुट्याउनै गाह्रो हुने गरेको छ ।
स्वस्थ र ताजा अन्डा मानव स्वास्थ्यका लागि उपयोगी त छन् तर यसको सही उत्पादन, भण्डारण, वितरण र प्रयोग भएन भने यो विषसमान पनि हुन सक्छ । अन्डाको दैनिक प्रयोग गर्नेहरुले अब अन्डा खानुभन्दा पहिले धेरै कुरा सोच्नुपर्ने भएको छ, कतै हामीले विष पो खाइरहेका छैनौँ ?
नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र हो । तर यहाँ अन्डाको सन्दर्भमा ४ वर्षअगाडि मापदण्ड आए पनि त्यसको पालना भएको छैन र यो वा त्यो बाहानामा मापदण्डको कार्यान्वयन सम्भव छैन भनिरहेका छन् । जसका कारण आम उपभोक्ताले अस्वस्थ, मिति गुज्रिएका र सडेगलेका अन्डा किनेर खाइरहेका छन् र रोग किनिरहेका छन् ।
यदि ताजा र मापदण्ड मिलेको अन्डा खाएमा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हो तर हामीले जुन तरिकाबाट अन्डा खाइरहेका छौँ, अब भने सोच्ने बेला आएको छ, कतै हामीले विष पो खाइरहेका छैनौँ ?